Ndụmọdụ 5 maka Withnagide Media Dị Ka Ọkachamara Ọkachamara | Martech Zone
Ndụmọdụ 5 Maka alingnweta Media Dị Ka Isi Nweta Ọkachamara
Fraịde, Ọgọstụ 21, 2020 Fraịde, Ọgọstụ 21, 2020 Ron Gold
Ndi oru nta akuko banyere igwe onyonyo na ndi oru nta akuko gbara ajuju banyere udi okwu nile, site n’udi isi cheputa ulo n’ulo rue uzo di nma iji chebe ezumike nka. Dịka ọkachamara n'ọhịa gị, enwere ike ịkpọ gị ka ị sonye na ngalaba mgbasa ozi ma ọ bụ bipụta akwụkwọ, nke nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji wuo akara gị ma kesaa ozi dị mma banyere ụlọ ọrụ gị. Ndị a bụ ndụmọdụ ise iji hụ na ahụmịhe mgbasa ozi dị mma, na-arụpụta.
Mgbe Media Kpọọ, Zaa
Ọ bụrụ na ịnwere ohere ka a gbaa gị ajụjụ ọnụ na TV ma ọ bụ bipụta ya, hapụ ihe ọ bụla ị na-eme. Dị ka onye isi, otu ọrụ gị kachasị mkpa bụ ijide n'aka na ụlọ ọrụ gị na-enweta ezigbo pịa. Ndị otu mgbasa ozi nwere ike kpọọ otu n'ime ndị asọmpi gị, yabụ mgbe ha họọrọ ịkpọ gị, were ohere iji nweta aha ụlọ ọrụ gị yana ozi gaa ebe ahụ.
Zaa n'oge na-abịa ma wepụta onwe gị. Ọ bụrụ na ị na-emekọ ọnụ ma nwee ike ịnweta ya, ọ nwere ike ịbụ mmalite nke mmekọrịta dị ogologo na nke bara uru. Nye onye nta akụkọ ahụ nọmba ekwentị gị ma gwa ya na ọ nwere ike ịkpọtụrụ gị oge ọ bụla.
Hazie Ihe Want Chọrọ Andzọ And Ga-esi Kwuru Ya
Nwee atụmatụ zuru ezu banyere ihe ịchọrọ ịgafe na nyocha ọ bụla nke mgbasa ozi ọ bụla. Onye nta akụkọ ahụ nwere usoro nke ya: Ọ chọrọ inye ndị na-ege ya ntị akụkọ na-atọ ụtọ, na-enye nkọwa. Ma na ị nwere a burukwa: na-ekwurịta okwu ziri ezi banyere gị ụlọ ọrụ. Wantchọrọ ịza ajụjụ nke onye nta akụkọ ahụ, mana mara otu esi agbakwunye.
Na-ekwu na onye nta akụkọ na-arụ ọrụ TV na nkịta nke ọma, yana ihe ngosi aka banyere otu ndị mmadụ ga-esi hụ na nkịta ha dị mma. O nwere ike gbaa onye na-azụ nkịta ajụjụ maka ndụmọdụ. Onye na-azụ ihe nwere ike ịkekọrịta ahụmịhe ya na ịdebe nkịta ike, ma na-ekwukwa na ọ bụ onye ọzụzụ na-aga nke ọma kemgbe afọ 25 yana na ọ na-etinye ọtụtụ ịhụnanya na mbọ iji mepụta ụmụ nkịta ahụike, obi ụtọ.
Mara Ihe Know Maara, Na Ihe Don't Na-amaghi
Dị ka onye isi nke ụlọ ọrụ gị, ị kwesịrị ịme ọtụtụ n'ime ajụjụ ọnụ mgbasa ozi. Ghọtara nnukwu ụlọ ọrụ gị karịa onye ọ bụla, ị bụ ihu nzukọ ahụ. Mana oge ụfọdụ enwere ndị nọ n'ọgbakọ gị nke nwere ọkaibe pụrụ iche gbasara otu isiokwu. Ọ dị mkpa icheta na ọ bụ ezie na ị nwere ike ịbụ ọkachamara n’ọtụtụ ihe, ị bụghị ọkachamara n’ihe niile.
Kwuo na ụlọ ọrụ gị na-edozi ihe mgbakwunye na vitamin. Nwere ike ịmara nke ngwaahịa gị bụ nke a na-eto nke ukwuu na ndị na-ere ahịa kachasị, mana ị nwere ike ịmaghị sayensị ziri ezi n'azụ ngwaahịa ọ bụla. Yabụ ọ bụrụ na ajuju ajuju banyere otu mgbakwunye na-arụ ọrụ, ọ ga-akacha mma ịpị ọkachamara sayensị nke na-arụ ọrụ na ngwaahịa ahụ iji gbaa ajụjụ ọnụ. Chọpụta ndị dị iche iche nwere aka ọrụ dị iche iche na nzukọ gị, ma kwadebe ha tupu ị gwa ndị mgbasa ozi okwu.
N'ihe yiri ya, ọ bụrụ na onye nta akụkọ ajụọ gị ajụjụ ị na-amaghị azịza ya, ị nwere ike iche na ọ bụ ihe ihere kacha mma. Ma echegbula: Onweghị ihe dị njọ n'ịgwa onye nta akụkọ ahụ:
Nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ, ma m chọrọ ime nnyocha iji mee ka ị nweta azịza dị mma. Enwere m ike ịlaghachikwute gị ma emechaa taa?
Amakwala azịza ya. Mgbe ị laghachiri azụ na onye nta akụkọ ahụ, jide n'aka na itinye azịza ya n'okwu nke aka gị. Dịka ọmụmaatụ, egbula na mado okwu site na akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ weebụsaịtị ma zigara ya onye nta akụkọ ahụ. Ajuju obula ajuju aghaghi iji ihe omuma gi zaa - obu ezie na inwere ime nyocha iji nweta ihe omuma ahu.
Na-asọpụrụ onye na-ede akụkọ
Na-asọpụrụ ndị nta akụkọ mgbe niile. Nabata aha onye nta akụkọ, ma ọ bụ na TV, ekwentị ma ọ bụ nyochaa weebụ.
Jiri nkwanye ugwu kwuo okwu. Kwuo ihe dịka “Nke ahụ bụ ezigbo ajụjụ” na “Daalụ maka itinye m.”
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị chere na ajụjụ bụ ihe nzuzu, emela ka onye nta akụkọ ahụ nwee nzuzu. Asịla, “Gịnị mere i ji jụọ m otu ahụ?” Don't maghị etu onye nta akụkọ ahụ ga-esi nwee ike were azịza gị wee mee ka ozi ahụ baa n’akụkọ.
Emegiderịta onye nta akụkọ ahụ, ọkachasị mgbe ị nọ n'ikuku. Buru n'uche na ọ bụrụ na ị na-adịghị mma ma na-ekwesi okwu ike, akụkọ ahụ ga-eji ụda na-adịghị mma.
Ọ bụrụ n ’ị gwa onye nta akụkọ okwu, ọ ga-achọ ebe ọzọ oge ọzọ ọ ga-achọ ọkachamara n’ọrụ gị.
Ọ bụrụ na a na-agba gị ajụjụ ọnụ na igwefoto, tinye ụfọdụ n’ime ọdịdị gị. Ndi nwe mmadu, oburu na i yi ekike, dochie jaket; ọ dị ka ọkachamara. Na ọnọdụ nke uwe, uwe golf na akara ụlọ ọrụ gị bụ nhọrọ magburu onwe ya. Mụmụọ ọnụ ọchị mgbe ị na-ekwu okwu ma ghara ịna-ekwu okwu.
N'ezie, ọtụtụ ajụjụ ọnụ taa na-eme Zoom ma ọ bụ teknụzụ yiri ya. Jide n'aka na ị na-eji ejiji ejiji (ma ọ dịkarịa ala site n'úkwù), ma attentionaa ntị na ọkụ na nzụlite gị. Kama ọgba aghara aghara, ihe na-enye obi ụtọ, nke dị mma - ikekwe na njirimara ụlọ ọrụ gị nke pụtara ìhè - ga - enyere aka igosi gị na ụlọ ọrụ gị ihe dị mma.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ịnagide usoro mgbasa ozi, ka anyị mara. Dika ahia ahia na ndi mmadu na ndi mmadu, Ọrụ Ahịa na-enye ọzụzụ mgbasa ozi yana ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ.
Tags: ọkachamara ọkachamaraAjụjụ ọnụ mgbasa oziajụjụ ọnụ n'ịntanetịpịamkparịta ụka mmekọrịta ọha na ezembugharị
Ron Gold bụ onye isi oche na onye isi oche nke Ọrụ Azụmaahịa, mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze na ụlọ ọrụ azụmaahịa dabere na East Setauket, NY Ọ bụkwa onye guzobere na onye na-akwado ihe ngosi Voice nonprofit Voice na 103.9 FM LI News Radio.
MQLs Gafere - You Na-amụba MQMs?
Gịnị bụ Ọdịnaya Ahịa?